Guuleed: “Galmudug gacanta ayay ka baxaysaa haddaan xal degdega loo helin” | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed: “Galmudug gacanta ayay ka baxaysaa haddaan xal degdega loo helin”
Xaaladda amni ee Dowlad goboleedka Galmudug, ayaa mareysa meeshii ugu xumeyd, sida ay sheegayaan khuburo amni oo ka soo jeeda degaanka.
GALMUDUG, Soomaaliya – Taliye ku-xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Cabdisalaan Guuleed, ayaa sheegay in Madaxda uu ugu horreeyo Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ay ku fashilmeen wax ka qabashada amniga degaannada maamulka oo maraya halkii ugu liidatay, sida uu hadalka u dhigay.
“Xaaladda amni ee Galmudug weligeed ma gaarin heerkaan, doraad reer Bacaadweyn ayay Alshabab ku qasbeen in ay la shaqeeyaan, inkastoo ay aad u dagaalameen aqirkii waa loo xoog sheegtay, maantana Wisil ayay sidii oo kale ku sameeyeen, Mana kaaga jeedo wax dhiilla ah, Galmudug gacanta ayay ka baxaysaa hadaan xal degdega loo helin”. Ayuu yiri Guuleed
Ma jiro howlgal xooggan oo maamulka Qoorqoor, uu ku qaaday Al-Shabaab tan iyo markii kursiga ay Madaxtooyada Soomaaliya u boobtay sanad iyo bar ka hor.
Al-Shabaab, waxa ay la wareegeen degaanno aysan waligeed hore u tagin, halka ay hadda wadaan dhaqdhqaad xooggan oo ay gacmaha Galmudug kaga saarayaan degaanno dhaca Gobolka Mudug.
Inta badan waddooyinka isku xira degaannada ayaa cabsi lagu maraa, waxaana si joogto ah Al-Shabaab loogu arkaa degaanno laga sifeeyay toban sano ka hor.
Axaddii ayay ahayd markii ay weerar xooggan ku qaadeen degaanka Wisil oo hoos taga degmada Hobyo, halkaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan soddon ruux oo dhinacyadii dagaalamay iyo dhacab isugu jira.
Qoorqoor, ayaa inta badan dibad wareeg ka ah degaannada Maamulka, Baarlamaanka ayaa ku dhawaad siddeed bilood xirnaa, halka inta badan xubaha Wariisadu ay degan yihiin Muqdisho.